URafael Sabatini, iminyaka eli-143 yenoveli enkulu ye-adventure | Uncwadi lwangoku
Ziyazaliseka namhlanje 143 iminyaka wokuzalwa URafael Sabatini, Omnye wababhali abakhulu be iinoveli ezonwabisa. Lo mbhali ongumama ongumNgesi kunye notata wase-Italiya batyikitya ezinye zezona zihloko zibalaseleyo nezikhunjulwa kakhulu kohlobo olo. Akunakwenzeka ukuba angafundanga okanye abone kwimidlalo yakhe yefilimu Umphathi wegazi, ukuya Ulwandle ulwandle wa I-Scaramouche. Ke ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe masikhumbule amanye amabali akhe kunye neenguqulelo zabo kwiscreen esikhulu.
1 URafael Sabatini
3 Iinguqulelo ezine zefilimu
4 Umphathi wegazi
5 Intaka yaselwandle
6 Inkumba emnyama
7.1 Ezinye izihloko
Ndiyoyika izizukulwana ezitsha Igama likaRafael Sabatini alivakali ngathi lininzi okanye akukho nto kubo. Kodwa kwabo kuthi sele bekwiminyaka kwaye bebengabatshintshi abantwana ekufundeni nakwimidlalo bhanyabhanya iSabatini ntonye ezona ndawo zintle. Mhlawumbi besisazi umsebenzi wakhe ngaphambili enkosi kwi-cinema ngaphezulu koncwadi, e-Hollywood kwakungekho maninzi amaqhawe anegunya elingenakwenzeka kwaye abaphangi beepirate babenyanisile.
IiSabatini zazivela Inyama negazi, babephethe amakrele kwaye babamba iinqanawa zabaphangi. Ukongeza, zazivela kwamanye amaxesha kwaye zazine-aura yemfihlakalo okanye kwafuneka zitshintshe ubunikazi bazo. Okanye banxibe iimaski okanye iimaski kwaye bahlala bephuma emngciphekweni ngokulungileyo boyise abenzi bobubi emsebenzini.
USabatini wayengumbhali we amabali amafutshane kunye neebhayografi, kodwa ngakumbi kwezo noveli ze-tUhlobo lwembali, oluninzi lokuzonwabisa kunye noxwebhu oluchanekileyo. Mhlawumbi isitayile sakhe, ngokweemowudi zangoku, siphelelwe lixesha, kodwa umxholo wakhe awukho kwaye nomxholo wombalisi wamabali onomdla uhlala nawo.
USabatini wasweleka ngoFebruwari 13, 1950 I-Adelboden, ESwitzerland. Umfazi wakhe wesibini, emva kokubhubha kwakhe, waba nebinzana aqala ngalo ukubhala umsebenzi wakhe kwilitye lakhe I-Scaramouche: "Wazalwa enesipho sokuhleka kunye nokuqonda ukuba umhlaba uphambene".
Wapapasha inoveli yakhe yokuqala, Abathandi baseIvonne, ngo-1902, kodwa kwade kwaphela phantse ikota yenkulungwane kamva iphumelele nge I-Scaramouche Ngo-1921. Ebekwe ngoQhushululu lwaseFrance, lo msebenzi wawuthengisa kakhulu ngelo xesha. Impumelelo iya kudityaniswa kunyaka olandelayo nge Umphathi wegazi.
Lilonke wapapasha Iinoveli ezingama-31 zokuzonwabisa, uninzi lwazo yayilulungelelwaniso lwefilimu. Kodwa i izikripthi azizange zithembeke ezincwadini naseSabatini uzikhanyele ezi nguqulelo. Ukongeza kwiinoveli ze-adventure, wapapasha Iincwadi zamabali amafutshane ezisi-8 kunye neebhayografi ezi-6 yabantu bembali. Kwakhona wabhala ye midlalo, kubandakanya ukulungelelaniswa I-Scaramouche.
Iinguqulelo ezine zefilimu
Sizibonile ewe okanye ewe. Kungenxa yokuba bayinxalenye ye- I-Hollywood yeyona mpumelelo iphambili yokucinga nge-30s, 40s kunye 50s. Kuba U-Errol Flynn njengoko ugqirha uPeter Igazi wajika waba ngumphathi wepirate Igazi alilibaleki. Njengoko ikwi Intaka yaselwandle. Kungenxa yokuba yaphawula ubudlelwane obunesiqhamo bukaFlynn kunye nokusebenza nomlawuli uMichael Curtiz okanye abadlali UOlivia de Havilland, uBasil Rathbone okanye uClaude Rains.
Kungenxa yokuba imaski yamehlo, i-leggings enemigca kunye ne-duel yekrele elimangalisayo phakathi kukaStewart Granger noMel Ferrer en I-Scaramouche okanye ubuhle obungenakuthelekiswa nanto bukaJanet Leigh no-Eleanor Parker. Kuba ikwacwangcisiwe kwimemori yethu ye-cinephile leyo I-Tyrone Power kwisikhafu esimnyama nesibomvu kwikhabhathi kunye noMaureen O'Hara kwi Inkumba emnyama. Kwaye kuba, ekugqibeleni, besingenakuba nexesha elingcono ngala mabali.
Kwakukho inguqulelo yokuqala ngo-1924, kodwa eyona ikhunjulwayo yile UMichael Curtiz, de 1935.
Ugqirha Igazi likaPeter Ungugqirha ozinikele ngokupheleleyo kwizigulana zakhe ezihlala emaphethelweni eengxaki zopolitiko. Kodwa nini utyholwa ngokungafanelekanga ngokungcatsha umbuso isimo sakhe sengqondo siyatshintsha. Ukuthunyelwa njengekhoboka kwi-West Indies, kodwa enikwe ubuchule obukhulu kunye nobuqili, uyakwazi ukuphunyuka kwaye Uba yipirate eyoyikisayo, uCaptain Blood.
Kwakhona kuMichael Curtiz obuyileyo waya ngqo 1940 ku-Errol Flynn, kwiminyaka emibini emva kokuba uyenzile URobin weWoods. Njengangaphambili, kunjalo Olunye udidi lwe-adventure kunye nepirate.
Xelela iihambo zika UGeoffrey thorpe, i-corsair yesiNgesi, uloyiko kwiinqanawa zaseSpain. Xa usondela komnye wabo ubamba uDona UMaria Alvarez waseCordoba, iaristocrat yaseSpain, athandana nayo kwangoko. Xa ukumkanikazi ebuyela eNgilane U-Elizabeth I Umthuma kwimishini ebalulekileyo apho aya kuthi awele ezandleni zaseSpain.
Wamthabatha ukuya movie UHenry king en 1942 kunye nabalinganiswa bayo babenjalo Amandla eTyrone kunye noMaureen O 'Hara phakathi kwabanye.
Sibuyele emva kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe apho ipirate UHenry Morgan Utyunjwe njengeRhuluneli yesiqithi saseJamaica yiNgilane yesiNgesi. UMorgan ufuna ukucoca uLwandle lweCaribbean lweepirate kwaye ke ngoko ucela uncedo koogxa bakhe ababini, Isilumkiso kunye noTommy Blue. Kodwa omnye wabo, UCaptain LeechAkayi kujoyina iqela kwaye ngoncedo lwabavukeli baya kuthumba intombi yerhuluneli yangaphambili, eya kubangela umlo wegazi.
El umlawuli UGeorge Sidney ikhokelwe 1952 le nguqulo de Iskripthi sitshintshe kakhulu xa kuthelekiswa nenoveli yoqobo kaSabatini. Baneenkwenkwezi kuyo UStewart Granger, Eleanor Parker, Mel Ferrer noJanet Leigh.
Singaphakathi eFransi Inkulungwane XVIII Kwaye ifilimu isixelela ngeentetho ze UAndré-Louis Moreau (UStewart Granger), unyana wobugorha wendoda enesidima. UPhilippe de Valomorin, Umhlobo osenyongweni kaAndré, ngumvukeli oselula obulawa ngu UMarquis de Mayne, yindoda ehloniphekileyo nephethe ikrele. UAndré ufunga ukuziphindezela ukusweleka komhlobo wakhe kunye nokubulala imarquis. Ingxaki kukuba kufuneka ubambe ngaphambili kufuneka ufunde ukuphatha ikrele.
Okwangoku, uAndre uya kudibana UAline de Gavillac (UJanet Leigh) oya kuthandana naye, kodwa yena ungumlingane wemarquis. UAndré uza kugqiba ngokujoyina kwiqela lababonisi Ngubani oza kumfundisa ukuba yimpi elungileyo kwaye amncede aqhubeke nokuziphindezela.
IiBardelys eziBalaseleyo. UKumkani Vidor wayilungisa kwi-cinema ngo-1926.
Ihlobo laseSan Martín
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » URafael Sabatini, iminyaka eli-143 yenoveli enkulu ye-adventure
Ukuqwalaselwa kwakhona kweCastillo sitsho
Inyani yile yokuba uRafael Sabatini ngumbhali ongaziwayo, nangona omnye wabalinganiswa bakhe efuna ukusinda, uCaptain Blood. Ndikuthetha oku kuba ingxelo-bhanyabhanya yamva nje, kubonakala kum, ifilimu yaseRussia ukusukela ngo-1991.
Ngapha koko, xa kuziwa kukungcamla, akukho noveli (nangona zilungile) yeyona ndiyithandayo. Eyona ndiyithanda kakhulu… Yeyiphi ingxaki, ukugqiba ukuba yeyiphi eyona ndiyithandayo! Zininzi, inyani, "iBellarión", "Ikrele lamaSilamsi", "Imaski yaseVenetian", "iBardelys the Magnificent", ingangaphezulu kolu luhlu, nangona ndingakwazi ukuyeka ukubiza igama elithi "Indoda yendiza", umqobo wokufa "," Paola "," Uthando phantsi kweengalo "," Hidalguía "..., ngaphandle komyalelo omisela ukukhetha, kuphela ukuba ndibabize ngegama endibakhumbulayo ngalo. Akukho sizathu sokuba "i-knight ye-tavern", "I-hawk yolwandle", "Abathandi base-Ivonne", "Ihlobo laseSan Martín", "Ingcwele ejikelezayo", "Inkumba emnyama", "I inkosana yothando "," Iintsimbi zethamsanqa "," Iflegi yenkomo "kunye" neMarquis yaseCarabás ". Ewe zininzi ezingekhoyo kuluhlu, kodwa kungenxa yokuba ndingakhange ndizifumane, ezinjengale ndingathanda ukuyifunda, «Izinja zikaThixo» (Mhlawumbi ndiza kuyifumana ngaphambi kokuba ndihambe, okanye, ukuba isibhakabhaka sikhona kwaye ndinje ngendingathanda, ilayibrari, isenokuba ikhona).
Ndiyabulela! Enkosi kakhulu! esi sithuba sindinike umzuzu omnandi
Phendula u-Recaredo Castillo